Looking Glass မှ Alice Through သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေး ၅၀ တွင်ပါဝင်သည် - လှုပ်ရှားမှုစွန့်စားမှု
Looking Glass မှ Alice Through သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေး ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်
အဆိုတော်ဂျွန်နီ Depp၊ Mia Wasikowska၊ Anne Hathaway နှင့် Matt Lucas တို့သည် El Capitan ရှိ Disney ၏“ Alice Through The The Looking Glass” ၏ Premiere တွင်သရုပ်ဆောင် Sacha Baron Cohen၊ အဆိုတော် P၊ n၊ သရုပ်ဆောင်များ၊ ဟောလီးဝုဒ်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိမေလ ၂၃ ရက်၊ (Todd Williamson / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Voltron: ယခု Netflix တွင်ဒဏ္Legာရီကာကွယ်ရေးရာသီ2Jason Momoa စီးရီး Frontier သည် Netflix တွင်လွှင့်ထုတ်နေသည်
Looking Glass မှ Alice Through the Mia Wasikowska နှင့် Johnny Depp တို့သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။
ဒစ္စနေးပရိသတ်တွေအတွက်သတင်းကောင်း။ Looking Glass မှတဆင့် Alice ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Netflix တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်! ငါတို့ထည့်လိုက်ပြီ Looking Glass မှတဆင့် Alice Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သို့!
Looking Glass မှတဆင့် Alice Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည့် Disney ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်နောက်ဆက်တွဲ Zootopia၊ The Jungle Book၊ Captain America: ပြည်တွင်းစစ်၊ နှင့် အကောင်းဆုံးနာရီ။ ဒီနှစ်မှာလည်း Disney ရုပ်ရှင်တွေလာနေတယ်။ ဒါကြောင့် streaming service ကိုဘယ်ရုပ်ရှင်အသစ်တွေလာမလဲဆိုတာမကြာခဏပြန်စစ်ဆေးပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ကို Tim Burton မှရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဇာတ်ညွှန်းကို Linda Woolverton မှရေးသားခဲ့သည်။ Looking Glass မှတဆင့် Alice ၂၀၁၆ မေလ ၂၇ ရက်တွင်ပြဇာတ်ရုံများတွင်ပြသခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Burton ၏ ၂၀၁၀ ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည် Wonderland ရှိအဲလစ်။ ဒါဟာ Lewis ကကာရိုးရဲ့ပုံပြင်များအပေါ်အခြေခံသည် Wonderland ရှိအဲလစ် နှင့် Looking Glass မှတစ်ဆင့်
၂၀၂၁ မေလ ၁ ရက်: Zombieland သည် Netflix သို့လာသည်
Morbius ၏နေ့စွဲနောက်ဆုံးသတင်းများ - Live-action ရုပ်ရှင်ရှိသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
မချရသေးသည့်ရက်စွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေ - Live-action ရုပ်ရှင်ရှိသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Mia Wasikowska၊ Johnny Depp၊ Anne Hathaway၊ Helena Bonham Carter၊ Alan Rickman၊ Rhys Ifans၊ Sacha Baron Cohen၊ Michael Sheen၊ Timothy Spall, Matt Lucas, Stephen Fry နှင့် Lindsay Duncan တို့သရုပ်ဆောင်များကိုရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်အဲလစ်၏ Wonderland သို့ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်အပြီးတွင် Alice သည် Wonderland ရှိအခြားပြproblemsနာများအကြား၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သော Mad Hatter ကိုကူညီရန် Wonderland သို့ပြန်သွားသည်။
အပျက်သဘောဆောင်သောသုံးသပ်ချက်များနှင့်လက်လွတ်စပယ် box Office ရဲစွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေသော်လည်း, Looking Glass မှတစ်ဆင့် သင် Burton ရဲ့ဇာတ်ဆောင်နှင့်လုံးလုံးလိုက်တယ်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ပျော်စရာရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းနောက်ဆက်တွဲကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။
Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သောအခြားကြီးကျယ်သောကလေးများရုပ်ရှင်များစွာရှိသည်။ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ ကို streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကြည့်ရှုရန်ထိုရုပ်ရှင်များကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ဘယ်လောက်ရာသီ Charm အတွက်ရာသီ
jenna Fischer ဂျွန် krasinski လက်ထပ်ခဲ့သည်
အဆိုပါ Santa အပိုဒ်42016
အဘယ်သူသည်မွေးမြူရေးခြံပေါ် nick ပစ်သတ်